‘संक्रमण समुदायमा गइसक्यो, जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरौं’ – Namaste Dainik
September 16, 2020 NamastedainikLeaveaComment on ‘संक्रमण समुदायमा गइसक्यो, जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरौं’
३१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नियन्त्रणमा छ भन्दाभन्दै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या आधा लाखबाट उकालो लागेको छ । लामो बन्दाबन्दी र त्यसपछिका निषेधाज्ञाका बाबजुद कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको देखिँदैन । नेपालमा अहिले संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? सरकारको आगामी रणनीति के छ ? नेपालमा पहिलो व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएयताको ८ महिनामा सरकार कहाँ-कहाँ चुक्यो ?
यदि संक्रमित ५७ भएका बेला पोजेटिभिटी रेट १० भन्दा बढी थियो भने तपाईंको जिज्ञासा सही हो । तर, त्योबेला त पोजेटिभिटी रेट २.४ मात्र थियो । अर्को कुरा, परीक्षण कम भएर संक्रमण देखिएन भन्दै गर्दा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने साँच्चिकै समुदायमा संक्रमण फैलियो भने परीक्षण नगरे पनि मानिसहरु मर्न थाल्छन् । परीक्षण कम गर्दै संक्रमण लुक्दैन, इटालीकै उदाहरण हेर्न सकिन्छ ।
हामीले दैनिकभन्दा साप्ताहिक केस हेर्न थाल्यौं । यसरी हेर्दा ७ साउनपछि ६७ प्रतिशत केस लोकल देखियो । २७ प्रतिशत केस मात्र आयातित देखिनु नयाँ संकेत थियो । हेर्दाहेर्दै तराईका इण्डस्ट्रियल जोनमा हटस्पट बन्न थाल्यो । मानिसहरु रातारात काठमाडौं आए । र, यहाँ पनि केस बढ्न थाल्यो । यसरी आएका मानिसहरुलाई सरकारले रोक्न सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । रातिराति आएका मानिसलाई समुदायले नै ‘ल बस’ भनेपछि त गाह्रो पर्ने नै भयो । व्यक्ति-व्यक्तिलाई पक्रिन सक्ने हाम्रो सरकारको मेकानिजम पनि छैन । फेरि यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको पनि पर्दैन ।
अहिले हामी के क्लियर हुनुपर्छ भने समुदाय संक्रमण भइसक्यो । यस्तो बेला सरकारले चाहेर पनि समुदायमा संक्रमण रोकिन्न । सबैले कसरी बच्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । म त भन्छु, तत्काल जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरौं । किनकी भाइरसलाई हामीले कम आँक्नु भएन, यसलाई सजिलै रोक्न सक्दैनौं । यो समय कोरोना केही होइन भन्नेहरुको कथा सुनेर बस्यौं भने त हामी गलत ठाउँमा पुग्छौं ।
मानिसको मोबिलिटी रोकियो भने सबथोक हुन्छ भन्ने निषेधाज्ञा र लकडाउनको मोडालिटी हो । यसले सडकमा हुने मोबिलिटी त सबैतिर रोकियो होला, तर समुदाय र घरभित्रको मोबिलिटी रोकिएन, भाइरसको मोबिलिटी रोकिएन । जनस्वास्थ्य संकटकालले के भन्छ भने सडकमा आवागमन रोक्नु मात्र समाधान होइन । हरेक घरलाई एउटा युनिट बनाएर महामारीसँग लड्ने तयारी गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार घर-घर, व्यक्ति-व्यक्तिमा पुग्नुपर्‍यो, जनचेतना फैलाउनुपर्‍यो, मास्क र साबुन दिनुपर्‍यो । दिन सक्नेबाट लिने, किन्न नसक्नेलाई दिने गरौं ।
पहिलो वेभमा हामी धेरै कुरामा अल्झिएको सत्य हो । वेभ टू मा पुरानो गल्तीबाट सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौं । प्रतिकार्य योजना बनाएका छौं, त्यसअनुसार स्रोत साधानको जोहो गरेका छौं । आईसीयू, भेल्टिलेटर थपेका छौं हामी आफैंले बनाएको मापदण्ड विपरित क्वारेन्टिनमा धेरै मानिसलाई राखेको सत्य हो । कुनै दिन त क्वारेनिन्टमा बस्नेहरुको संख्या १ लाख ७० हजार समेत पुगेको थियो । ठूल्ठुला देशले पनि यसरी क्वारेन्टिन गर्न सकेनन् । तर, हाम्रो देशको वास्तविकता र गर्नुपर्ने त्यही थियो । गर्दागर्दै केही कमजोरी भयो । दोस्रो वेभमा क्वारेन्टिनको केही प्रभाव छैन । दशैंको बेलामा भारतबाट केही मानिसहरु घर आउलान् तर, क्वारेन्टिनको समस्या नआउला ।